Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2020 → juin → 30 → Fisolokiana amin’ny resaka Coronavirus : Dimy naiditra am-ponja tany Toamasina, LP ilay mpianatra ho mpitsabo
Mpandinika 30 juin 2020 at 9 h 41 min · Edit
Tena potika sy mampalhelo i Madagasikara ê!.. tsy ho tafarina mihitsy… indrisy.. Ny mpivaro-kena milaza azy ho chirurgien, ny mpitsara hono..?? toa tsy fantany akory ny dikan’izany!!…etc…etc…. mankarary fo
Ny tena olana dia ny dondrona rehtra ihany no tonga eo @ fitondràna, koa inona moa no andeha.? ny VOLA , ny VOLA ihany na @ fomba inona na @ fomba inona no mahamay ireto olona!!!..??? TSY TAFA INTSONY MIHITSY Ê!….SIMBA sY RAVA TANTERAKA…
Mateza 30 juin 2020 at 7 h 57 min · Edit
Izany ve no mba valim-pitsaràna kanefa olona misandoka volan’olona sady mivarotra aina ???
Tsy aleo tsy nianatra lalàna raha izany no mba didy avoaka.
Izany anie no tsy ilain’ny vahoaka ny fitsarana gasy é ! mampitombo ny fitsaram-bahoaka.
Lazalazao 30 juin 2020 at 7 h 19 min · Edit
Izany ve ny ho tonga mpitsabo any aoriana? Tokony ho saziana mafy koa ireo dokotera tsy mety mitsabo fa hoe tsy manam-bola ny marary…